Piwik iyo Google Analytics: Faa'iidooyinka Falanqaynta On-Premise | Martech Zone
Waxaan haysannay macmiil aan kula talinay Piwik. Waxay ku dhexjireen arrimo warbixino culus ah oo laxiriira Google Analytics iyo shirkad lacag lasiiyay Analytics mugga dadka soo booqda awgood ee ay ku soo gaarayeen goobtooda. Goobaha waaweyn ma ogaanayaan inay labaduba jiraan arrimaha daahitaanka iyo xaddidaadda xogta leh Google Analytics.
Macaamilku wuxuu lahaa koox websaydh aad u tayo badan leh oo qaadanaya Analytics gudaha wuu fududaan lahaa. Iyada oo ay weheliso dabacsanaanta loo qaabeynayo iyadoo lagu saleynayo barnaamijkooda, kooxda suuqgeynta ayaa sidoo kale la siin doonaa mid sax ah Analytics, in-waqtiga dhabta ah, oo aan khaladaad tirakoobka ku saleysan muunad qaadista martida.
Haddii aad dareento xaddidan Google Analytics, Piwik waxay noqon kartaa bedel weyn Beesha Piwik Daabacaaddu waa il furan Analytics qalab la socda casriyeyn joogto ah iyo siidayn cusub oo bilaash ah. Piwik PRO On-Dhismayaasha waxaa ku jira noocyo iyo adeegyo cayiman oo dheeri ah. Piwik PRO sidoo kale waxay bixisaa a xal daruur (halka aad weli ku leedahay xogta) haddii aadan ku jirin martigelinta gudaha. Piwik wuxuu leeyahay buuxa isbarbardhiga xal kasta boggooda.
Soo Degso Isbarbardhiga Buuxda
Piwik wuxuu kaloo soosaaray infographic dhamaan faa iidooyinka ay kubixiyaan Google Analytics. Waa la siiyay, kani waa xog-qaadasho eex ah. Google Analytics ayaa bixisa Google Analytics 360 macmiilka shirkadda. Mana aha inay tagto iyada oo aan la xusin in Google uu leeyahay faa'iidada Webmaster iyo isdhexgalka Adwords ee bixiye kale uusan waligiis bixin doonin.
Tilmaamaha Piwik PRO
Piwik waxaa ku jira dhammaan warbixinnada tirakoobka ee caadiga ah: ereyada ugu sarreeya iyo matoorada raadinta, websaydhyada, URL-yada bogga ugu sarreeya, cinwaanada bogga, waddammada isticmaala, bixiyeyaasha, nidaamka hawlgalka, saamiga suuqa biraawsarka, xallinta shaashadda, desktop VS mobile, hawlgelinta (waqtiga goobta, bogagga booqashada kasta) , booqashooyinka soo noqnoqda), ololeyaasha ugu sarreeya, doorsoomayaasha gaarka ah, bogagga gelitaanka / bixitaanka sare, faylasha la soo dejiyey, iyo qaar kaloo badan, oo loo kala saaray afar Analytics ka soo warbixi qaybaha - Soo-booqdayaasha, Waxqabadka, Soo-gudbiyeyaasha, Yoolalka / ganacsiga (30 + warbixinno). Eeg Liiska buuxa ee muuqaalada Piwik.
Cusboonaysiinta xogta waqtiga-dhabta ah - U fiirso socodka waqtiga-dhabta ah ee booqashooyinka websaydhkaaga. Ka hel aragti faahfaahsan booqdayaashaada, bogagga ay booqdeen iyo yoolalka ay kiciyeen.
Dhamaan Bogagga Shabakadaha - habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dulmar guud waxa ka dhacaya dhammaan boggaga internetka hal mar.
Evolution Row - Xogta mitir ee hadda iyo tii hore ee saf kasta oo warbixin kasta ah.
Raadinta yoolka raadinta - Raad-raac Yoolalka oo cadee haddii aad fulineyso ujeeddooyinkaaga ganacsi ee hadda jira.
Dabagalka Mawduuca - Cabir dareenka iyo qasabadaha iyo CTR ee boorarka muuqaalka, boorarka qoraalka iyo walxaha ku yaal bogaggaaga.
Cabbiraadno Gaar ah - U qoondee xog kasta oo caadada u ah booqdayaashaada ama ficilladaada (sida boggaga, dhacdooyinka,…) ka dibna indha indhee warbixinnada inta booqashooyin, beddelaad, bog-bog, iwm.
Kala-guurka Bogagga - Eeg waxa booqdayaashu sameeyeen kahor iyo kadib markaad fiirisay bogga gaarka ah.
Warbixinta xawaaraha bogga iyo bogga - Waxay la socotaa sida ugu dhakhsaha badan ee websaydhkaagu u gaadhsiiyo waxyaabaha ku soo booqda martidaada.
Lasoco isdhexgalka isticmaaleyaasha kaladuwan - Raadinta otomaatiga ah ee soo dejinta faylasha, riixida bogagga shabakadaha dibedda, iyo raadinta ikhtiyaariga ah ee 404 bog.
Raadinta taraafikada makiinadaha raadinta - In kabadan 800 oo matoorrada raadinta kaladuwan ah ayaa la raad raacay!
Ma jiro xad xaddidan - Waad keydin kartaa dhammaan xogtaada, adigoon xaddidnayn wax keyd ah, weligaa!
Isdhexgalka - in kabadan 40 CMS, qaab dhismeedka websaydhka ama dukaamada Ecommerce
Falanqaynta barnaamijka moobilka oo leh Piwik iOS SDK, Android SDK, iyo Module-ka Titanium.
Tags: bedel u ah gorfaynta googlefalanqaynta apixogta falanqayntaxaddidaadda falanqayntamartigelinta martigelintagorfaynta guriga ku socotaPiwikdaruuraha piwikbulshada piwikpiwik propiwik iyo gapiwik iyo google Analyticspiwik vs gapiwik vs google Analyticsfalanqaynta waqtiga dhabta ahfalanqaynta calaamadda cad